शंख बजाउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदा , शंख बजाउदा यी गम्भीर रोगबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ – Etajakhabar
शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६ | Friday, Apr 26, 2019
शंख बजाउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदा , शंख बजाउदा यी गम्भीर रोगबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ
एजेन्सी- हिन्दू धर्ममा कैयांै प्रकारका धार्मिक तौरतरिका छन्, जसको हाम्रो जीवनमा गहिरो महत्व छ। कतिपय यस्ता कार्यका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छन् । प्राचीन परम्पराहरु हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन बनाइएको पाइन्छ । यस्तै एक परम्परा हो शंख बजाउनु । हिन्दू धर्ममा शंखको महत्वपूर्ण स्थान छ। शंख राख्दा नकारात्मक उर्जा आउँदैंन र नराम्रो शक्ति टाढा भाग्छ । आयुर्वेदमा शंख निकै लाभदायी मानिन्छ । शंख बजाउनाले मूत्राशय, पेटको तल्लो भाग, छाति र गर्धनको मांसपेशीको स्वतः अभ्यास हुन्छ । जानौं शंख बजाउनाका फाइदा : फोक्सोका लागि फाइदाजनक
शंख बजाउँदा फोक्सोको राम्रो अभ्यास हुन्छ । यदि श्वासका रोगी नियमित रुपमा शंख बजाउँछन् भने यसको पूर्णतः निर्मूृल हुन्छ । शंख बजाउनाले अनुहार, श्वासतन्त्र, श्रवण तन्त्र तथा फोक्सोको अभ्यास हुन्छ । स्मरणशक्ति पनि बढ्छ।
छाला र हड्डीको हेरविचार – शंख छालाका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । रातको समयमा शंखमा पानी भरेर राख्ने र बिहान उठेर त्यो पानीले शरीरमा मसाज गर्ने हो भने छालासम्बन्धी रोग जस्तै, एलर्जी, सेतो दाग, विविरा आदि निको हुन्छ। शंखमा प्राकृतिक रुपमा क्याल्सियम, गन्धक, फस्फोरस भरपूरमात्रामा हुन्छ । यसका कारण शंखमा राखिएको पानीको सेवनले हड्डी पनि मजबूत हुन्छ । यो दाँतका लागि पनि लाभदायी हुन्छ।
आँखाका लागि गुणकारी – सुख्खा हुने, सुन्निने, संक्रमणजस्ता आँखाको समस्याको समाधानका लागि पनि शंखको उपचारबाट ठीक हुन्छ । यस्ता समस्या हुनेबित्तिकै शंखमा राखिएको पानीलाई हातमा राखेर समस्या भएको आँखा डुबाउने हो भने समाधान हुन्छ र यसका अलावा आँखाको ज्योति बढाउन रातभर शंखमा राखिएको पानीमा उत्तिकै मात्रामा साधारण पानी मिसाउने र आँखा धुनुपर्छ।
हृदयाघातको सम्भावना कम – शंखमा रातभर रााखिएको पानीमा गुलाब जल मिसाएर कपाल धुने हो भने प्राकृतिक रंग आउछ । यो पानीले आँखीभौं, दा¥ही र जुंगा पनि धुन सकिन्छ । यसले रौंमा मुलायमपन आउँछ । शंख बजाउनाले फोक्सोको प्रदूषित हावा बाहिर निस्कन्छ र शरीरले शक्ति प्राप्त गर्छ । प्रतिदिन यस्तो गर्नाले शरीर शक्तिशाली बन्छ र काम गर्ने उर्जा प्राप्त हुन्छ । यसका अलावा शंखको ध्वनी निरन्तर सुन्नु हृदयरोगीका लागि लाभदायी हुन्छ । यसको प्रभावले हृदयाघात हुने सम्भावना कम हुन्छ। स्वास्थ्यखबर पत्रिकामा खबर छ ।
मलद्वार र प्रोस्टेटका लागि फाइदाजनक – शंख बजाउँदा यसको सिधा असर मलद्वार र प्रोस्टेटमा पर्छ । मलद्वारको मांसपेशी मजबूत हुन्छ भने पायल्सलगायतका सानातिना रोग नजिकै पर्दैन । यस्तै यसको असर पुरुषको प्रोस्टेट क्षेत्रमा पर्छ । नियमित शंख बजाउनाले प्रोस्टेटसम्बन्धी रोग लाग्न पाउँदैंन।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०३, २०७६ समय: २०:३५:२३
हाम्रै नेपालमा : कान्छी खेलाउने पतिको लिंग जेठी पत्नीले पारिन हसिँयाले चैट
धेरै मेकअअप नगर्नुहोस, छालाको क्यान्सर होला ! स्वास्थ्यमा हुन्छ यस्तो घाटा
दीर्घरोगीको अन्तिम गन्तव्य तातोपानी कुण्ड, यस्ता छन् फाइदाहरु
तपाई कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? उमेरको हिसाबले कुन उमेरको मानिसलाई कति घण्टा सुत्नुपर्दछ ? जान्नुहोस्
सँसारकै यस्तो अनौठो ठाउँ, जहाँका चराहरुले गर्छन् अनौठो ब्यबहार देखाउँदै गर्छन् रातमा आत्महत्या
के तपाईलाई चुरोटको लत नछुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? चुरोटको लत छुटाउन दिनहुँ सेवन गर्नुहोस् यी चिजहरू
यी दुई बाल बैज्ञानिक जस्ले आविष्कार गरे अमेरिकाबाट नेपालमा बत्ति बाल्ने/निभाउने मिल्ने अनौठो प्रविधि (भिडियोसहित)
संसारकै यस्तो अनौठो सडक : जुन ५ तले घरको छत गाँसिएर बनेको छ, सडक हेर्नेको लाग्छ घुँईचो (भिडियो)
मोहि खानु भएको छ ? जान्नुहोस् मोहि खादा स्वास्थ्य र सौन्दर्यको लागी हुन्छन् यस्ता अत्यन्त उपयोगी फाइदा
यसकारण भोलि सार्वजनिक बिदा
सरकारले ६ दिन सार्वजनिक विदा दिने
अचानक बिरामी भएका विनोद चौधरीको उपचारका क्रममा निधन
धर्ती माताले गरिन नेपालको डरलाग्दो भबिस्यवाणी , राजा र रबीको पनि यस्तो भबिस्य (भिडियो)
कुनै समयका चर्चित नेपाली हिरो पैसाको अभावमा मृत्युको मुखमा पुग्दै ! डायपर लाएर खाटमै थलिए (भिडियो हेर्नुस)
अदालतले भन्यो ओली सहित ६ जना नेतालाई थुनामा पठाउनु
केहीबेर अघि भारतको अरुणाचल प्रदेशमा गयो शक्तिशाली भूकम्प, नेपालमा पनि हल्लाएपछि सर्वसाधारण त्रसित
अभिनेता सलमान खान र अमिरलाई पछि पार्दै अक्षयले रचे इतिहास
पथरी काण्ड : कविताको डर लाग्दो खुलासा, बरु म मर्छु ! बाहरियो डर लाग्दो रिपोर्ट…(हेर्नुहोस् भिडियो)
घरवेटीले ट्याक्सको सट्टा घुष दिन खोजेपछि… – हेर्नुहोस् ‘NO भ्रष्टाचार’ (भिडियो)
नेपालमै पहीलो विरामी , डरलाग्दो रोग फेमीगस भल्गरीस नेपालमा (भिडियो)
पङ्खाको तार छुटेर करेन्ट लाग्दा बालिकाको ज्यान गयो
सलमान खानलाई सुपरस्टार बनाउन यि सुन्दरीहरुले दिएका थिए साथ , को को हुन् ति हिरोइनहरु ?
तीव्र गतिको ट्रिपरको ठक्करबाट योगीको ज्यान गयो